Description:6 layer PCB,,,,,
Ny vokatra avy amin'ny 6 Layer PCB , mpanofana manokana avy any Shina, 6 layer PCB , mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
6b layer black solder PCb misy 3 workdays  Contact Now
6 layer PCB dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana elektronika compact toy ny fitaovana azo entina, modules komunikasi ary fitaovana miaramila. Misy ny fangatahana injeniera avo lenta amin'ny famokarana manokana, amin'ny...
6b layer black solder PCb misy 3 workdays
Shina 6 Layer PCB mpamatsy
Ny takelaka PCB 6 misy sosona dia amin'ny birao PC layer 4 miaraka amin'ny takelaka famantarana fanampiny fanampiny eo anelanelan'ireo fiaramanidina. Ny fantsona mahazatra amin'ny habaka PCB 6-layer dia misy takela-pandeha 4 (làlam-paritra 2 + sosona anatiny) ary planeta anatiny 2 (iray ho an'ny tany ary ny iray ho an'ny herinaratra). Manatsara ny EMI izany amin'ny alàlan'ny fanolorana efam-pandevenana 2 ho an'ny marika haingam-pandeha avo sy ny takelaka 2 matevina ahafahana mivezivezy amin'ny haingam-pandeha ambany. Ny takelaka famantarana dia tokony hikatona amin'ny fiaramanidina mifanila.